Silicone Factory - Shiinaha Silicone -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Alaabta silikoonku waa soo dhaweeyaan dadka oo dhan sababtoo ah waa sifo nadiif ah oo jilicsan. Waxyaabo badan oo silikoon ah ayaa ah darajada cuntada, waxaa loo isticmaali karaa badeecadaha taabanaya cuntooyinka. Dhammaan noocyada kala duwan ee qaababka, naqshadaha iyo midabada ayaa loo heli karaa alaabta silikoon si ay u muujiyaan ama u muujiyaan macnaha naqshadeeyeyaasha, xitaa nafta gudaha ku jirta. Walxaha silikoonnada ah ee aan caadiyan samayno waa silsilado silsilado ama jijimooyin leh qurxiyo kala duwan, silsilado Muhiim ah, Kiisaska Taleefanka, Boorsooyinka iyo boorsooyinka, Koobabka, Daboolka Daboolka Koobka, Coasters, alaabta kale ee jikada iyo IWM. Maaddadu waxay dhaafi kartaa dhammaan noocyada heerarka imtixaanka ee Mareykanka ama Hay'adda Yurub, fadlan hubso inay ammaan tahay in la isticmaalo waxyaabaha taabanaya cuntada. Weydiimahaaga waa in 24 saac gudahood lagula macaamilaa kooxdayada hufan. Tayada ugu fiican, qiimayaasha tartamaya, wakhtiga wax -soo -saarka gaaban, iyo adeegga wanaagsan waa inay kaa dhaadhiciyaan xiriirka ganacsi.
Jijimooyin Magnetic ah oo loogu talagalay Clips Clips